Ruby munhu pasi pasi munhu. Achaita zvese zvaanogona kuti nyaya yako ivharwe zvinobudirira. Iye anoona zvinyorwa izvo vamwe vasingazvione. Mune zvimwe zviitiko chidiki diki chinogona kuita chakakura kukanganisa. Ruby anoda chinetso uye anotora mukana wekutarisana nayo. Haazodzivirira nyaya dzakaomarara dzemutemo. Anoita zvese zvinobvira kukupa rairo rakavimbika zviri pamutemo. Kuvanzika uye kutendeseka kwakakosha kwazvo kuna Ruby.
pasi pevhu - rine chinangwa - rakarurama
mukati Law & More, Ruby ane hunyanzvi mumutemo wechibvumirano, mutemo wemakambani pamwe nevemutemo mabasa emakambani. Iye anogona zvakare kupihwa basa seyemubatanidzwa gweta kukambani yako. Uyezve, Ruby ari kushandawo mumunda wemutemo wekutama.
Munguva yake yekusara Ruby anofarira kushandisa nguva nemhuri uye neshamwari, zviri nani achinakirwa nezvakanaka chikafu, uye anofarira kudzidza mutauro weSpanish.